MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT နှင့်အတူလက်တွဲပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံးဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအဖြစ် ဖော်ဆောင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။
ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရောင်းချရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ
စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်/လုပ်ငန်းစပ်တူ စီးပွားမိတ်ဘက်
MPT အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများထံသို့ ယခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်နှင့်MPT ၏ ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကြီးမားလာစေရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်။ MPT အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ လုံလောက်စွာထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်ရေးနှင့် သုံးစွဲသူများထံသို့ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးဝေနိုင်စေရေးတို့တွင် ပါ၀င်ကူညီလိုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရောင်းချရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်/ မိတ်ဘက်များကို ရှာဖွေလျှက်ရှိပါသည်။
MPT အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရောင်းချရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းပါ၀င်မည့် တန်ဖိုးထားရပါသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကိုလည်း စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် အကူအညီများကိုလည်း ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပါ၀င်ထားသော အဖွဲ့အစည်းတိုင်း အကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည့် ဆွဲဆောင်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကော်မရှင်ခများ ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆက်မပြတ် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာလျှက်ရှိသော ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ရောင်းချရေးကွန်ရက်ကြီးတွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ MPT နှင့် အတူမြန်မာပြည်အတွက် ရှေ့သို့လှမ်းချီလိုက်ပါ။
ဘာကြောင့် MPT ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ ရောင်းချရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်သင့်တာပါလဲ?
မြန်မာပြည်၏ နံပါတ်တစ် MPT သည် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လက်ရှိသုံးစွဲသူ သန်းပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့် စျေးကွက်ကို ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည့် အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းအော်ပရေတာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
MPT အနေနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်မာသည့် အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးနှင့် ဆွဲဆောင်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကော်မရှင်ခများအား အသုံးပြု၍ ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT အနေနှင့် သင်၏ စွမ်းဆောင်မှုများကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သလို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဘယ်လို ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ ရောင်းချရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အမျိုးအစားဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ?
MPT ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ ရောင်းချရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမှာပါလဲ?
MPT ၏ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရောင်းချရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အဖြစ်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက partnerquery@mptjo.com.mm သို့ အောက်ပါ အချက်အလက်များပေးပို့၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဖြစ်လိုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရောင်းချရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အမျိုးအစား : တိုက်ရိုက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊eTop Up ကိုယ်စားလှယ်
“ကုမ္ပဏီ” အမည်နှင့် လက်မှတ် (ဖြန့်ချီသူနှင့် တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ အတွက်သာ)
ကုမ္ပဏီအမည် နှင့် လက်မှတ် ( ဖြန့်ချီသူ နှင့် တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သာ)
ဆိုင်၏ အတွင်းပိုင်းပုံ နှစ်ပုံ နှင့် အပြင်ပုံ နှစ်ပုံ (တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသာ)
ဆိုင်၏ခန့်မှန်းချေ အခန်းအကျယ် (အလျား x အနံ) (တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသာ)
တာဝန်ရှိသူ၏ အမည် နှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက် ( အီးမေးလ် , ဖုန်းနံပါတ်)
MPT သည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်နေသည့် အော်ပရေတာဖြစ်သည့်အလျှောက် ကျွန်ုပ်တို့ကို သုံးစွဲသူများ၏ ဆက်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံများ မြင့်တက်လာနိုင်စေရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ MPT အနေနှင့် သုံးစွဲသူများ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသည့်အခါ ယခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးကို အစဉ်ရှေးရှု၍ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ စျေးနှုန်းသင့်တော်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းဟန်းဆက် ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စျေးကွက်ချီတက်မှု အစီအစဉ်များလည်း MPT မှ လုပ်ဆောင်မှုများထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
MPT မှ ဤသို့လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် လုပ်ငန်းရှင်များစွာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး နောက်ထပ်ပူးပေါင်းမှုများကိုလည်း အစဉ်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသူ အများဆုံး အော်ပရေတာ ဖြစ်သည့်အလျှောက် သင်၏ စီးပွားရေးအား သုံးစွဲသူများစွာ ရရှိစေခြင်းနှင့် နေရာဒေသ အနှံ့ ကျယ်ပြန့်စေခြင်းတို့အတွက် လက်တွဲရန် အသင့်တော်ဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆက်မပြတ် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လျှက်ရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ MPT နှင့်အတူ မြန်မာပြည်အတွက် ရှေ့သို့လှမ်းချီလိုက်ပါ။
MPT မှ ရှာဖွေနေသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပုံစံ
MPT နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်လိုပါက
MPT ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက partnerquery@mptjo.com.mm သို့ ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပုံစံအမျိုးအစား: VAS partner/Mobile Device partner/Marketing partner
ကုမ္ပဏီ၏ ထုန်ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်များ
– တာဝန်ရှိသူ၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ ( အီးမေးလ် , ဖုန်းနံပါတ် )